Buy Yamaha YZF R1 (48Lks) in မန္တလေး on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Hein Htet Min
ကြည့်သူအရေအတွက်: 823 (+1)
မော်ဒယ်နိမ့်ပေမယ့် အမြင်ရော စီးနှင်းမှုမှာပါ မနိမ့်သေးတဲ့ အင်ဂျင်ပါဝါကြီး ဘီးကောင်းလေးတစ်စီး ရောင်းဦးမယ်ဗျ............
Model - 2001 late
Power. - 1000cc
Key. -2key
Tier. - Pirelli (Italy) 90% new
#ချိန်းစပေါ့ကတ် အပြည့် အင်ဂျင်သံအရှင်း
#ဘက်ထရီ လဲနောက်ဆံမတင်းရအောင် Motobatt(၇၀၀၀၀တန်) အကောင်းထည့်ပေးထားပါတယ်
#Coolant ပိုက်လဲ ဂျပန်ပိုက် အကောင်းထည့်ထားပြီး coolant အရည်လဲ အသစ်လဲထားပါတယ်ဗျာ
#အိပ်ဇောကလည်း ဆိုင်ကယ် ချစ်သူတိုင်း အကြိုက်တွေ့စေမယ့် Yoshimura USA ကာဗွန်ပြောင်းရှည်လေးနဲ့ အသံငြိမ်ငြိမ်လေးပါ(နောက်ဆုံးပုံတွင်ကြည့်ရန်)
#အော်ဆေးပတ်လည် စတစ်ကာလေးတွေလည်း အမြင်ဆန်းအောင် ဖိုင်းထားပါသေးတယ်
#အင်ဂျင်ဝိုင် ပလပ်ကတော့ပြောစရာမလိုအောင် အမြဲ maintenance လုပ်နေတဲ့ဘီးလေးပါ
# ဒီဘီးလေးရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ - ၄၈ သိန်း ငြိနှိုင်းပေးပါ့မယ်(ငွေစင်သီးသန့်ပါ)
ဘီးကတော့ မန်းလေးမှာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ လာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
အခြားသိလိုတာရှိခဲ့ရင် CB (or) 09-780680383 သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်........!!!
ဈေးအသင့်အတင့် ဘီးကောင်း Racing ကုန်းချင်တဲ့ ညီကိုတွေ ဆက်သွယ်ပေးကြပါခင်ဗျာ.....!!!
အမည်: Yamaha YZF R1